Dadwaynaha Masar oo wali damaashaadaya kadib Mubarak - BBC News Somali
Dadwaynaha Masar oo wali damaashaadaya kadib Mubarak
Kadib in ka badan laba todobaad oo qas siyaasadeed ah oo dhaliyay in madaxwayne Xusni Mubarak uu xilka ka dego Jimcihii, ayaa Masar ay isku dayaysaa in ay dib ugu yara laabato noloshii caadiga ahayd.
Inta badan dadka ayaa dib ugu laabtay shaqadoodii iyadoo waddooyin ay qashin buuxaan.
Dadwaynaha ku sugnaa fagaaraha Xoriyadda magaalada Qaahira ee Taxriir Square ayaa bilaabay howlgal nadaafad ah kadib habeen dabaaldegyo farxadeed ay jireen.
Hase yeeshee, tiro ballaaran oo kooxaha dhaqdhaqaaqa waday, ayaa wali ku sugan fagaaraha iyadoo leh waan joogaynaa ilaa ciidamadu ay dadka rayidka ah awoodda ku soo wareejiyaan.
Weriye BBC uga soo warama Qaahira ayaa sheegay in mucaaradka ay wali doonayaan in si dhaqso ah oo cad loogu muujiyo in Masar aysan si fudud isugu kala badalin laba xukun oo kali-talis ah.
Ciidamada, ayaa wali Tank-yadoodii iyo baabuurta hubaysan ay ku sugan yihiin waddooyinka gaar ahaanna waddooyinka muhiimka ah.
Mr Mubarak ayaa hadda la sheegay in uu ku sugan yahay qasri ku yaalla jasiiradda badda cas ee Sharm el-Sheik.
Madaxwayne Obama ayaa madaxa la taliyayaashiisa dhinaca military-ga u diraya dalalka Urdun iyo Israel si looga wadahadlo saamaynta kacdoonka iyo isbadalka ka dhacay Masar ku yeelan karaan gaashaanbuurtiisa.
Mid ka mid ah kaaliyayaasha Admiral Mike Mullen ayaa sheegay in uu kala hadli doono arrimaha amniga, isla markaana loo xaqiijin doono xubnaha isbahaysiga ka midka ah ee muhiimka u ah sida Maraykanku uga go'an tahay xiriirkooda.
Waxaa lagu wadaa in uu la kulmo boqor Cabdallaha dalka Urdun, iyo ra'iisul wasaaraha Israel, Benyamin Netanyahu.
Horay, ayaa Mr Obama uu u sheegay in golaha sare ee ciidamada dalka Masar ee hadda dalka taladiisa haya ay waajib tahay in uu xaqiijiyo xilli gaarsiis macquul ah oo lagu helo doorashooyinka cadaalad iyo xor ah.
Dalalka carabta ee gobolka
Hay'adaha wararka ee dalalka Carabta oo dhan ayaa ka hadlaya dhacdooyinka dalka Masar.
Wakaaladda wararka Urdun, ayaa sheegtay in dowladda Masar ay tixgalisay rabitaanka dadkeeda isla markaana kalsooni badan lagu qabo in ciidamada ay xaqiijin doonaan xasiloonida Masar.
Wargaysyada dalka Urdun iyo Bahrain ayaa ku nuuxnuuxsaday dadaalada ugu dambeeyay ee dowladahooda ay isku dayeen in ay wax kaga qabtaan cabashooyinka dadkooda.
Wakaaladda wararka Yemen, oo iyada lafteedu dibadbaxyo cabasho ah ay ka dhacayeen, ayaa sheegtay in dowladdu ay ku kalsoon tahay in military-ga Masar uu xaqiijin doono xasiloonida.